Utachiona. - Potatoes News
Muvhuro, September 20, 2021
Zviratidzo zvembatatisi mop pamusoro hutachiona
Yekuongorora labhu yaifanirwa kuratidza izvi mbatatisi mop-top hutachiona (PMTV) zviratidzo. Cherekedza yakatarwa arcs inogona kuitika neaya mavhairasi. Ichi chiratidzo chebhuku rekuparadza chinogona kutsausa nekuti hazviwanzo kuitika.
Mufananidzo naJordan Eggers
Potato mop-top virus (PMTV) uye fodya rattle virus (TRV) hutachiona hwakasiyana, asi zviratidzo zvavanokonzeresa zvakafanana.
"Kupwanya" izwi rekare rinoshandiswa kutsanangura arcs, mapundu, kana mhete munyama yematubhi anokonzerwa nehutaputi mop-top kana hutachiona hwefodya. Kana iwe ukaona izvi zviratidzo, zvakakosha kuti utarise hutachiona hwauri kusangana nahwo, nekuti marongero avo ehurongwa anosiyana. Symptomatic tubers inofanirwa kutumirwa kunzvimbo yekuongorora inozoshandisa bvunzo yeDNA-kusiyanisa hutachiona.
PMTV Inokonzera Mop-Top Chirwere
Iyo ivhu-inotakurwa nehutachiona hunokonzera hupfu hwehupfu, Spongospora subterranea (protozoan), inoparadzira PMTV kumatata. Inogona kurarama muvhu sekuzorora maspore kwemakore mazhinji uye, kana yangounzwa, zvinoita zvisingaite kubvisa. Iyo spores inobata PMTV, uko inoramba ichishanda kwenguva yakareba. Utachiona hunowanzoitika panguva yekutangisa kwehubhu uye chikamu chekutanga chekusimudza uye chinosimudzirwa nehunyoro hwevhu nevhu.
Zviratidzo zveFodya Rattle Virus paPatato
Brown necrotic arcs, flecks, kana mhete munyama zvinoratidza kupora. Zviratidzo zvakapfava zvinogona kunge zviri zvishoma zvine mutsvuku-mutsvuku kana mitsetse isina simba. Maronda akakomba akakura, akasviba-bhuru kana ane ngura, uye anogona kunge aine corky mameseji. Zvakatora ongororo yeDNA kuti isimbise TRV.
Mufananidzo naLauna L. Cimrhakl
TRV Inokonzera Corky Ring Spot
Stubby midzi nematodes inoendesa TRV kumatata (Trichodorus uye Paratrichodorus mhando). Mamatodes anowana hutachiona uku achidya pamidzi yezvirimwa zvine hutachiona. Stubby midzi nematodes uye TRV ine nzvimbo dzakakura, uye zvirimwa zvakawanda nemasora zvinoshanda semidziyo yehutachiona. Hutachiona hunogona zvakare kupararira pamapanga kana zvimwe zvishandiso zvinoshandiswa kutema mhodzi yemidziyo yekudyara.
Zvakajairika Zvimiro uye Kudzora
Hazviwanzo kukonzera zviratidzo zvemashizha.
Zviratidzo zveTuber zvinogona kuvhiringidzika neizvo zvehutano hwepanyama, senge yemukati brown brown nzvimbo uye kupisa necrosis.
Zviratidzo hazviwanzo kuitika zvakafanana mukati memunda. Hutachiona hutachiona hauratidze zviratidzo. Zviratidzo zvinogona kunge zvisingaonekwe panguva yekukohwa, uye kusimba kwechiratidzo kunogona kuwedzera mukuchengetedza.
Mimwe miriwo ingangodaro inoburitsa zviratidzo zvekutsvaira neTRV uye / kana PMTV kupfuura vamwe.
Mavirusi maviri aya anopinzwa muminda mitsva kuburikidza nekufamba kwevhu rine ivhu, mupfudze, kana marara emiti (senge mbatatisi inocheka) uye / kana nekudyara mhodzi dzembeu dzakazara.
Kudzivirira ndiyo yekutanga uye yakanakisa nzira yekugadzirisa aya hutachiona. Dzivisa kuunza PMTV uye TRV uye avo maveketa muminda yako. Ongorora mbatatisi mbeu yezvironda usati wadyara. Usatamise ivhu rakazara, mupfudze, kana kudyara marara muminda yakachena. Chenesa nekuchenesa michina yese kana uchifamba kubva kuminda ine vanhu uchienda kuminda isina vanhu.
Kana iwe uchizodyara nzvimbo dzakazara, zvakakosha kutevedzera yakasimba sisitimu protocol.
Muminda yakatekesherwa kare, kurima miriwo isinganyanyo kuratidza zviratidzo zvekurohwa. Iwe unogona kuwana masosi emamirimwa mazhinji nekunzwa kwavo kune TRV kana PMTV-inosimudzira tuber zviratidzo muExtension bulletins.
Kuwedzera Management kwe PMTV
Chiverengero chakati chema Labs vanoedza ivhu kuvapo kwe PMTV uye / kana powdery mildew spores.
Iko hakuna yakanaka powdery scab inodzora. Kufukidzwa kwevhu ne metam sodium (semuenzaniso, Vapam) inogona kudzikisa inoculum mazinga muvhu asi haizobvise zvachose powdery scab spores kana PMTV. Zvidzidzo zvinoratidza in-furrow application ye fluazinam (Omega, Syngenta) pakudyara inodzvinyirira yakaderera kusvika pakuenzanisa powdery scab.
Kuwedzera manejimendi eTRV
Paradzai masora eTRV uye tendererai nezvirimwa zvisina kukoka kudzora TRV inoculum.
Gara uchiongorora ivhu kuti rakasimba midzi nematodes kuitira kuti ugone kuita ruzivo rwekutonga sarudzo. Zvakanaka, unganidza ivhu ivhu kusvika pa6- kusvika ku10-inch kudzika kana tembiricha yevhu yakatenderera 70 ° F uye ivhu rakanyorova Stubby midzi nematodes inonyanya kufamba uye inofamba pasi kusvika pamamita maviri kusvika matatu kudzivirira tembiricha yakanyanyisa.
Stubby midzi nematodes (uye TRV) inogona kudzvanywa ne fumigants (Telone) kana mamwe nematicides, semuenzaniso, Vydate (Corteva), Velum Prime (Bayer CropScience), Movento (Bayer CropScience).
Kudzora stubby midzi nematodes ine fumigants zvinogona kunge zvakaoma nekuda kwekufamba kwavo, zvakadaro. Asi fumigate mukupera kwezhizha kana kudonha, nekuti tembiricha yevhu remuchirimo kazhinji inotonhora zvakanyanya uye yakaoma kurapwa kwakanaka.
Mutengesi weUK wezvegungwa-based biostimulant anoda kumisikidza network yematunhu agronomists
Joint basa reInternational Potato Center nyanzvi dzeCIP
11000 gore rekare mhinduro kudambudziko razvino: Mbatatisi yekare inogona kubudirira mukuchinja kwemamiriro ekunze
EGG Microtubers, Iye anokunda wePotatoEurope's Innovation Prize
Kuburitsa maronda-ekurapa maitiro mumatatata
Masayendisiti anotungamira kuedza kuponesa mbatatari dzekuEast Africa kubva kutyisidziro nyowani yezvipembenene
Ndapota Login kujoina hurukuro
04Oct(oct 4)8: 59 am08(oct 8)8: 59 pmAgroprodmash Moscow 2021
AGROPRODMASH chiratidziro chepasi rose chemidziyo, matekinoroji, mbishi zvinhu uye zvigadzirwa zveindasitiri yekugadzira chikafu. Kwemakumi maviri emakore kwave kuri kuratidzira kunoshanda kwe
AGROPRODMASH chiratidziro chepasi rose chemidziyo, matekinoroji, mbishi zvinhu uye zvigadzirwa zveindasitiri yekugadzira chikafu.
Kwemakumi maviri emakore kwave kuri kuratidzira kunoshanda kwemhinduro dzenyika dzakanakisa idzo dzinozoitwa nemabhizinesi ekugadzira chikafu eRussia.
AGROPRODMASH ndiyo yako yakanaka bhizinesi rekuvandudza chishandiso:
mhinduro dzakanakisa dzehunyanzvi dzekugadzira chikafu
yepamusoro yekugadzira chikafu maindasitiri otomatiki masystem
hunyanzvi hwekutakura zvinhu, zvishandiso uye mapurojekiti
AGROPRODMASH ndiyo inotungamira yekuratidzira kuRussia muKudya Maindasitiri: Zvishandiso uye Chikamu chemidziyo * munzvimbo dzese:
nhamba yevanoratidzira uye vashanyi
nhamba yenyika dzinoratidzira
AGROPRODMASH inzvimbo yemusangano yegore negore yemabhizinesi eRussia nevekunze vanofarira matekinoroji epamberi, zvishandiso, mbishi zvinhu uye zvigadzirwa zveindasitiri yekugadzira chikafu.
4 (Muvhuro) 8:59 am - 8 (Chishanu) 8:59 pm
05Oct(oct 5)9: 01 am07(oct 7)9: 01 pmChibereko Kukwezva 2021
Chibereko Kukwezva 2021 inozivikanwa senzvimbo yepasi rose pamwe nepuratifomu, kwaunogona munzvimbo imwe kuwana zvigadzirwa zvitsva uye dzidza zvakawanda nezve
Chibereko Chinokwezva 2021 inozivikanwa senzvimbo yepasi rose pamwe nepuratifomu, kwaunogona mune imwe nzvimbo kuwana zvigadzirwa zvitsva uye dzidza zvakawanda nezve zvitsva mumunda.
Chiratidziro ichi chichaitika ku IFEMA Feria de Madrid kubva musi wa 5 kusvika musi wa 7 Gumiguru uye ichagamuchira vanhu vanosvika 2000 varatidziri uye vanopfuura 95 000 vevashanyi vevashanyi, vachimiririra nyika dzinopfuura zana nemakumi mana.
Chibereko Chinokwezva 2021 musangano wehunyanzvi hwehunyanzvi unokwanisa kuburitsa zviuru zvezviitiko, kusimudzira ruzivo rwemakambani uye kuratidzira zvigadzirwa zvavo pakati pezviuru zvevatengi, vagoveri nevashambadzi.
Izvi zvinoita kuti chiitiko chive chikuru kupuratifomu yehunyanzvi chikuva pasirese yakasarudzika muchikamu chemichero & miriwo. Expo ichaunza akawanda enzvimbo dzakakumbirwa zvikuru kubva muchikamu ichi:
Miti Mitsva uye Zvibereko
Bio Gadzira uye nezvimwe.
5 (Chipiri) 9:01 am - 7 (China) 9:01 pm
28Oct(oct 28)9: 03 am30(oct 30)9: 03 pmPMA Nyowani Summit Musangano & Expo 2021
Pamusangano wePMA Fresh Summit Convention & Expo vanopfuura zviuru makumi maviri vevatori vechikamu mune yepasirese kugadzirwa kutsva uye maruva ekupa cheni anouya pamwechete kuti adzidze, network, kuvaka hukama,
Pamusangano wePMA Fresh Summit Convention & Expo vanopfuura zviuru makumi maviri vevatori vechikamu mune yepasirese kugadzirwa kutsva uye maruva ekupa cheni anouya pamwechete kuti vadzidze, network, kuvaka hukama, uye kuita bhizinesi.
28 (China) 9:03 am - 30 (Mugovera) 9:03 pm
Ernest N. Morial Convention Center 900 Musangano Wenzvimbo Blvd New Orleans, LA 70130 United States
AVIKO INOZIVISIRA PREMIUM KUNYANYA KUNYANYA KUKOSHA KWOKUDYA KWEZVIMBA
ULTRAF PRO - Bringign chaiyo uye kutonga kune smart kudiridza